ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: အိုဘားမားမိန့်ခွန်းအပေါ် အမြင်များ (ဧရာဝတီ ရုပ်သံ)
အိုဘားမားမိန့်ခွန်းအပေါ် အမြင်များ (ဧရာဝတီ ရုပ်သံ)
ဦးသန့်မြင့်ဦးခင်ဗျား၊ ဒီအင်တာဗျူးကို နားထောင်ကြတဲ့သူတွေက မြန်မာတွေဖြစ်သလို အဲဒီမြန်မာတွေထဲမှာ အင်္ဂလိပ်လို နားမလည်တဲ့ ပြည်သူတွေလဲ ပါတယ်ဆိုတာကို အလေးထားပြီး အဲဒီပြည်သူတွေပါ နားလည်နိုင်တဲ့ ဝေါဟာရတွေကို ရွေးခြယ်ကျင့်
သုံးပေးမှ ခင်ဗျားပြောချင်တဲ့ စကားတွေက သူတို့နားထဲ အထိရောက်သွားနိုင်တာပေါ့။
ရင် အများနားလည်တဲ့ ဘာသာစကားကို သုံးပေးရတယ်ဆိုတာကို အလေးအနက် အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
Why mix Burmese and English? Its so ugly.
Lin Htinn said...
သန့်မြင့်ဦး ဗမာလိုနဲ့ ဘိုလို ရောရော ပြောသွားတာ ရွံမိတယ်။ ဗမာပဲ ဗမာလို ပြောပေါ့။ ဗမာ စကား နဲ့ ပြောလို့ မရတဲ့ ဘိုစကား ရှိသလား။ ဦးသန့် မျိုးဆက် အဲသလို ဖြစ်နေတာ ရင်နာတယ်။
thant myint oo speaks his opinion asamiddle man,he doesn't dare to criticize thein sein regime because he is working for them.
Let me tell you how disgrace thant myint oo is, he is suchashameful guy who isagrandson of U Thant. He was born and raised in New York , he is notaBurmese citizen.
Before he wasamember of Burmese strategic group those who are activists to fight against military regime.
Now, he gotagood deal to work for thein sein regime and came to Burma with his family.
I am pretty sure, if his grandfather see he is working for regime, U Thant will be very disgusted about his grandson.
people like thant myint oo , oo myint who are working and helping for regime and cronies. They will suffer in the near future and regret what they are doing for the sake of those top ranks and rich people not ordinary Burmese citizens.
We don't need people like them even though they are well educated.
We need more people who are very brave and love their own country, they are like U Gambiya , Ko Nay Myo Zin , Ko Pho Phyu.
သူ့ ကို လာ မေးလို့ ပြောရ တာ ပဲ တမင် လုပ်ပြော တာတော့ မဟုတ်မှန်း သိသာ ပါ တယ် အများသိစေ ချင်ရင်ခင်ဗျားတို့အားနေတာပဲ ဘာသာ ပြန် ပေး လိုက်ကြပေါ့
မဟုတ်တာ တွေ လက်ညိုးထိုး နေတာ မတော်သေးသရွေ့က တော့ သူများပဲ အားကိုး နေရမယ်
Damnn shame on u all....
to ..unknow ,,November 21, 2012 6:01 PM. u suck my dick asshole,we r busy.say to him to explain in myanmar.